လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှုပ်ရှားနိုင်မှုကြောင့် LH ဇီဝရရှိနိုင်မှုကို (၂၀၀၂) တွင်ပြန်လည်လျှော့ချနိုင်ခြင်း - Your Brain On Porn
LH bioavailability ၏ Reversible လုပ်လျော့ချရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရလဒ်များကို (2002)
အထီး coital ခွန်အားမရှိခြင်း, သို့မဟုတ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED), ရှိသည်ဖို့သို့မဟုတ်သင့်လျော်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု၏ရှေ့တော်၌အပြည့်အဝစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကတော့နာတာရှည်မဖြစ်နိုင်ဘူး။1 75 y ကအသက်အားဖြင့်လူတို့ကအနည်းဆုံး 50% ခြုံငုံပျံ့နှံ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 20 သန်းလူနာအကြောင်းကိုဖြစ်ခြင်း, ခွန်အားမရှိခြင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။2,3 ED တစ်လက္ခဏာထက်ရောဂါဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အော်ဂဲနစ်နှင့် nonorganic သို့မဟုတ် psychogenic သို့, ထို etiology ၏အခြေခံပေါ်တွင်ခွဲခြားထားပါသည်။ မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအဆုံးစွန်အကြောင်းမရှိ၏, ခွန်အားမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်နာမဝိသေသန psychogenic, ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့လျှင်ပင်, လင်းလင်းရည်ညွှန်းမသင့်လျော်ဖြစ်ပါသည် se နှုန်း စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်အယှက်၏ရင်းမြစ်။ ထို့ကြောင့်ပညာရေးအပေါငျးတို့သဖြစ်ပွားမှုများမှာ, ဒါမှမဟုတ်, psychogenic ဖြစ်လာသည်။4
ခွန်အားမရှိခြင်း၏အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများသွေးကြော (arteriogenic နှင့်• Neurogenic disease အာရုံကြောခွန်အားမရှိခြင်းဖြစ်စေသောဆီးချိုရောဂါ၏ဖယ်နှင့်အတူ) လျော့နည်းမကြာခဏ (arteriogenic နှင့် venogenic), iatrogenic (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ခွဲစိတ်ခန်းသုံး), • Neurogenic disease အာရုံကြော (အလယ်ပိုင်းနှင့်အရံ neuropathy), နှင့်, endocrine ဖြစ်ကြသည်။ မူလတန်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်း hypogonadism, luteinizing ဟော်မုန်း (LH) ၏မြင့်မားသို့မဟုတ်အသီးသီးနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ် testosterone ဟော်မုန်း၏ subnormal အဆင့်ဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်, 15.6 သင်ျခြိုယောက်ျား၏ 268% မှာတွေ့ရှိထားသည်5 အခြားသူများကိုသာ 2.1% ပျံ့နှံ့ (အစီရင်ခံနေစဉ်n= 330) ။6 ဤသည်စဉျးကွာဟမှုခွန်အားမရှိခြင်း၏အဓိပ်ပါယျအတွက်ကွဲပြားမှု, ထိုလူနာအသက်, ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ပါဝင်စံကနေဆင်းသက်လာ။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကကြောင့် ED မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏လျှော့ချရေးသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ကူးပြောင်းရေးကာလကျဆင်းခြင်းပြောခြင်းငှါကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။7 ဒီ Reversible လုပ်, ဆွေမျိုး hypotestosteronemia ၏ pathogenesis ရှင်းလင်းခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်း LH ၏ bioactivity နှင့် immunoreactivity တိုင်းတာခြင်းသည်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဟော်မုန်း၏အရည်အသွေးကွာခြားမှုကိုပြသခဲ့သည်။ LH ၏လျှို့ဝှက်ချက်သည် pulsatile ဖြစ်သဖြင့်ဇီဝတက်ကြွသော LH (Leydig ဆဲလ်များအပေါ် androgen ပေါင်းစပ်မှုကဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း) နှင့် immunoreactive LH ('B / I အချိုး') သည်သွေးရည်ကြည် LH သွေးခုန်နှုန်း nadir တွင် ၂ မှ ၄ အထိကွဲပြားသည်။ LH ထိပ်နှင့်အတူ2ကနေ4အထိ။8 ထိုကွဲပြားမှုများ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးရှင်းလင်းချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်, ထိုကဲ့သို့သောဟော်မုန်း glycosylation ၏ပြည်နယ်အဖြစ် Post-ဘာသာပြန်ချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ, တစ်အခန်းကဏ္ဍမှထင်နေကြသည်။ ပါဘူးရှငျနဲ့ကျွန်မ-LH အကြားတစ်ဦးက dichotomy အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-gonadal ဝင်ရိုးအများအပြားမမှန်အတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။9,10 ထို့ကြောင့် B / ငါအချိုးအတွက်ကွဲပြားမှုဟာ hypothalamo-pituitary ရှုပ်ထွေးပါဝင်သော GnRH Secret အတွက် pathophysiological အပြောင်းအလဲများကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။11
အဆိုပါအလားအလာ, ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုကဒီမှာအစီရင်ခံ immunoradiometric ဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, လိင်တက်ကြွစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအသက်-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရန် LH ထုတ်လုပ်မှု၏အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စသည်တို့အတွက် ကွဲပြားခြားနားသော nonhormonal ကုသမီနှင့်အပြီးအော်ဂဲနစ်နှင့် nonorganic ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူလူနာအသီးသီး bioassay, ။
အားလုံးစမ်းသပ်ချက်ဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအစီရင်ခံနာတာရှည် ED နှင့်အတူ 83 လူနာအုပ်စုသည်ယခင်ကဖော်ပြထားခဲ့သည်။7 လူနာကအောက်ပါပါဝင်စံအပေါငျးတို့သတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော်မူသောငါတို့၏ endocrine ဆေးခန်းမှာမြင်ကြဆက်တိုက်, လူနာလူနာခဲ့ကြသည်: ပထမဦးဆုံးစာမေးပွဲ (အသက် 1-18 မှာ 70 နှင့် 18 y ကအကြား (35) အသက်: 37.3%; အသက်အရွယ် 36-55: 48.2%; အသက်အရွယ် 56-70: 14.5%); လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲမှာအနည်းဆုံး2y ကကြာချိန်၏ (1) ED, တစ်ဦးလက်တွေ့မေးခွန်းလွှာအားဖြင့်သာတည်သကဲ့သို့,12 အနည်းဆုံးအား3y က၏ (1) တည်ငြိမ်ကြားဆက်ဆံရေး; (4) ကိုကုထုံးနောက်ဆက်တွဲပြန်သွားပါ။
ကျနော်တို့အတူဤလေ့လာမှုလူနာမှဖယ်ထုတ်လိုက်: cryptorchidism နှင့် varicocele ၏ (1) သမိုင်း; (2) ဆေးခန်းထင်ရှား hypogonadism; (3) အတိတ်သို့မဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးကလက်ရှိအသုံးပြုခြင်း, (4) ယခင်ကပညာရေး၏ etiology သတ်မှတ်ပါတယ်။
အဆိုပါလက်တွေ့မေးခွန်းလွှာလူနာအများစုမှာပုံမှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလေ့ကငျြ့မပြုခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ရှစ်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူသို့မဟုတ်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအပြည့်အဝစိုက်ထူ, ဘဲ, masturbated ။ လူအပေါင်းတို့သည်လူနာအတွက်ခွန်အားမရှိခြင်းကြောင့်မဆိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြောင်း, နာတာရှည်နှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာတစ်ခုချင်းစီစိတ်ရှည်အခြေခံ (Pre-ကုထုံး) မှာဟော်မုန်းပရိုဖိုင်းကိုအကဲဖြတ်ဖို့, သူ့ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေမယ့်ကျနော်တို့အသိပေးသဘောတူညီခကျြအပျေါမှာ 30 ထိန်းချုပ်မှုစေတနာ့ဝန်ထမ်းစုဆောင်း။ သူတို့ကအသက်အရွယ်အတန်း 10-18, 35-36 နှင့် 55-56 ၏အသီးအသီးအဘို့အ 70 ယောက်ျားသုံးယောက်အုပ်စုများဖြစ်ကြသည်။ ဘာသာရပ်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းမေးခွန်းလွှာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်း Form ကိုဖြည့်စွက်ဖို့တောင်းခဲ့သည်,13 အနည်းငယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏နောက်ခံ၊ လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုသတင်းပေးရန်။ ဖယ်ထုတ်လိုက်စံလူနာများနှင့်အတူတူပင်ခဲ့ကြသည်။ ၀ င်ခွင့်စံနှုန်းများမှာ - (၁) ယေဘုယျကျန်းမာရေး၊ (၂) တစ်ပတ်လျှင်လိင်ဆက်ဆံမှုအနည်းဆုံးအောင်မြင်မှုနှစ်ခုနှင့်တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေး။
လေ့လာမှုမှဝန်ခံခဲ့သည်အဆိုပါသင်ျခြိုယောက်ျားကအောက်ပါအချက်အလက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာအုပ်စုနှစ်စု (အော်ဂဲနစ်နှင့် nonorganic) သို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်:14 ဓာတ်ခွဲခန်း၏ရလဒ်များကို (များသော, Hepatic, lipidic နှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ profile များကို), လေ့ကျင့်ခန်းမီနှင့်အပြီး (မင်နီဆိုတာ Multiphasic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Inventory နှင့်ပြည်နယ်ရိုပူပန်မှုအညွှန်းကိန်း), အာရုံကြော (bulbocavernous တုံ့ပြန်မှုအောင်းနေချိန်အချိန်) နှင့်သွေးကြော (penile-brachial ဖိအားအညွှန်းကိန်းစိတ်ရောဂါ; နှစ်ခု vasodilator ပြုတ်ရည်မီနှင့်အပြီးရှုထောင် Doppler အကဲဖြတ်) parameters တွေကို။ ညွှန်ပြသည့်အခါ Pharmacocavernosometry, pharmaco-cavernosography နှင့် angiography အဓိကသင်္ဘော patency နှင့် veno-occlusive ယန္တရားလေ့လာဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
မျိုးဆက်ပွားဝင်ရိုး Immunoreactive Luteinizing ဟော်မုန်း (; 1.5-10.0 IU သည် / L ကိုရော်ဘာငါ-LH) အတွက်စီးပွားဖြစ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ Dufau အားဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ LH ထုတ်လုပ်မှု၏အရည်အသွေးရှုထောင့်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်မူကွဲသရုပ်ပြရန်, LH biopotency (B-LH), အ Rat Interstitial ဆဲလ် testosterone (RICT) assay နေဖြင့်လေ့လာခဲ့ခဲ့သည် et al,15 အသေးစားပြုပြင်မွမ်းမံအတူ။16 အဆိုပါခ / I-LH အချိုးယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တွက်ချက်ခဲ့ပါတယ်,17 ငါ-LH အဆင့်ဆင့် IRMA အစားက RIA အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်အတူ။ အသုံးပြုတဲ့စံရက်ရက်ရောရောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဇီဝဗေဒနျ Standard ဘုတ်အဖွဲ့ (လန်ဒန်, ဗြိတိန်) ကထောက်ပံ့ပေး, LH 78 / 549 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်စံကိုလည်း 2nd IRP hMG သုံးပြီးချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်ကဒီစံ၏ IU သည် / L ကိုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အဆိုပါ assay ၏ sensitivity ကို 0.4 IU သည် / L ကိုကြီးနှင့် intra- နှင့် interassay CV ကိုအသီးသီး9နှင့် 14% ရှိကြ၏။
gonadotropin Episode လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်နဲ့နှစ်ဦးစလုံး diurnally နှင့်ရာသီအလိုက်ကွဲပြားနေကြသည်ကတည်းက FSH ငါ-LH နဲ့ B-LH entry ကိုမှာသွေးရည်ကြည်ပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောခွန်အားမရှိခြင်းကုထုံး၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ.3လအတွင်း 15 မိသည် 90 မိကောက်ယူပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးထပ်တိုင်းတာခဲ့ကြသည် , 0800 ဇမှာစတင်။ နမူနာသွေးရည်ကြည်၏တူညီသောအသံအတိုးအကျယ်ကို အသုံးပြု. ထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှ -70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ B-LH, သွေးရည်ကြည်နမူနာတစ်ခုချင်းစီ pair တစုံ (အပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီဟော်မုန်းသည်ie ပေးထားသောလူနာများ၏အကျူးနဲ့ post-ကုထုံး) အတူတူပြေးအတွက် assayed ခဲ့ကြသည်။ လူနာကုသမှုနှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားခဲ့ကြသောကြောင့်, pituitary-testicular ဝင်ရိုး၏ရာသီအလိုက်မူကွဲရလဒ်ကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
မရွေးရသေးလူနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်များတွင်အတွက်ခွန်အားမရှိခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာအညီအမျှအဆိုပါသွေးလွှတ်ကြောရောဂါဗေဒ (34%) မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကိုယ်စားပြု (ရှစ်လူနာနှစ်ဦးကို etiologies ခဲ့ကတည်းက 91 ဖြစ်ပွားမှုတစ်ခုအပေါ် အခြေခံ. စဉ်းစား 31%) ကသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ဖြစ်ခြင်း, သွေးကြော etiology ခဲ့သည် ။ နိမ့်ဆုံးပျံ့နှံ့အဆိုပါ• Neurogenic disease အာရုံကြောအဖွဲ့ကို (8%) မှာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 27% အတွက်ကလက္ခဏာတစ်ခုအော်ဂဲနစ်အကြောင်းမရှိသရုပ်ပြမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
83 ဘာသာရပ်များအတွက်ဗိုလ်မှူး endocrine မူမမှန်မတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ prolactin ၏, Basal သွေးရည်ကြည်တန်ဖိုးများ (PRL), follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (FSH), သိုင်းရွိုက်-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (-TSH) နှင့်ဆီးအခမဲ့ cortisol (စီးပွားဖြစ်ပစ္စည်းများကဆုံးဖြတ်ကဲ့သို့) သိသိသာသာထိန်းချုပ်မှုကနေကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းလဲ arteriogenic ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်မြင့်မားတဲ့ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ, 28 လူနာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးကုထုံး၏ထိရောက်မှုကိုသီးခြားအခန်းများတွင်လူနာနှင့်မိတ်ဖက်အားမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် '၃ လကြာကုသမှုခံယူပြီးနောက်ကုသမှုသည်သင်၏ / သူ၏စိုက်ထူမှုကိုတိုးတက်စေခဲ့သလား' ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ (R .: 'ဟုတ်တယ်၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူး') ။ ထို့အပြင်ပြီးခဲ့သည့်လကလူနာနှင့်မိတ်ဖက်မှတ်တမ်းများကို အခြေခံ၍ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမည်မျှကြာအောင်ပြုလုပ်သည်ကိုအကဲဖြတ်ရသည်။ တစ်လလျှင်လိင်ဆက်ဆံမှုရှစ်ခုနှင့်အထက်အောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများ၊ တစ်လလျှင်အနည်းဆုံးအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုရှိခဲ့သည့်အခါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြေကြားသူများနှင့်သူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုသည့်အခါ 'တုန့်ပြန်သူမဟုတ်သူများ' သည်အကြောင်းအရာများကို 'အပြည့်အဝတုံ့ပြန်သူများ' အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် ။
ဟော်မုန်းပမာဏအတွက်ယုတ်± sd ပေမဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုပါတွဲနှင့် unpaired နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ရလဒ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် tမှာအရေးပါမှုအဆင့် setting အသုံးပြုပုံသင့်လျော်သောအဖြစ် -test P တန်ဖိုးများကို <0.05 ။
ပုံ 1 ငါ-LH အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကွောငျးဖျောပွဒါပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူ ED နှင့်အတူလူနာတပြင်လုံးကိုအုပ်စုတစု (5.3 ± 1.8 အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား vs 3.4 IU သည် / L ကို± 0.9, P<0.001; ပုံ 1A), ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းပုံမှန်အကွာအဝေး၌တည်၏။ ဆန့်ကျင်တွင်, (ထို RICT assay ဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, LH biopotency ဆိုလိုပုံ 1B), 13.6 ± 5.5 (သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ vs 31.7 IU သည် / L ကို± 6.9, P<0.001) ။ ထို့ကြောင့်ခွန်အားမရှိသောလိင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူလူနာများတွင် B / I-LH အချိုးကိုသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည် (3.6 ± 3.9) vs 9.7, 3.3 ± P<0.001; ပုံ 1C).
ဒီအထူးသဖြင့်ဟော်မုန်းပုံစံကို etiological subgroups လေးခုစလုံးမှာတွေ့နိုင်တယ်။ ဒါကခွန်အားမရှိတဲ့အခြေခံရောဂါ (ဇယား ၁၊ ကော်လံ 'All'၊ 'Pre' တန်း) ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်တွင်တွေ့ရသောအရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်7 ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှုလူနာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအသက်အရွယ် (Data ပြမပါ) အားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင်ရသောအခါစစ်မှန်သောကိုင်ထားပါ။
Non-ဟော်မုန်းကုထုံးကြားဝင်အမျိုးမျိုးအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနာလန်ထူသင်ျခြိုလူနာများ၏လျှော့ချ B / I-LH အချိုးသက်ရောက်သည်, ငါတို့တစ်ဦးချင်းစီကုထုံး၏အစအဦးပြီးနောက်ပါဘူးရှငျနဲ့ကျွန်မ-LH assay3လအတွင်းထပ်ခါတလဲလဲနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ ဒီကာလအတွင်းအောင်မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဟော်မုန်းတန်ဖိုးများ။ အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူ 15% ၌တွေ့စဉ်တစ်ခုလုံးသောကြောင့်စိတ်ရှည်အုပ်စုတစ်စုစဉ်းစား, စုစုပေါင်း၏ 3% ကုထုံး၏ 24 လအကြာက၎င်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါဘူး, 61%, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူရရှိခဲ့သည်။3± 83: ဟော်မုန်း biopotency, immunoreactivity နှင့်သူတို့၏အချိုးအစား Luteinizing 13.6 လူနာတပြင်လုံးကိုအုပ်စုတစု (B-LH အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခွန်အားမရှိခြင်းကုထုံး၏ 5.5 လအကြာသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတယ် vs 19.8 ± 6.9 IU သည် / L ကို; ငါ-LH: 5.3 ± 1.8 vs 3.3 ± 1.7 IU သည် / L ကို; B က / I-LH: 3.6 ± 3.9 vs 9.0 ± 7.4; P<တစ်ခုချင်းစီကိုခြားနားချက်များအတွက် 0.001) ။ သို့သျောလညျး, persistent ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်ကုထုံးပျက်ကွက်၏, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြန်လည်စတင်နှင့်အတူ subgroup အတွက်, B-LH (11.2 ± 2.2 vs 12.2 IU သည် / L ကို± 5.1), I-LH (5.6 ± 1.2 vs 5.0) 1.2 IU သည် / L ကို±, သူတို့၏အချိုးအစား (2.1 ± 0.7 vs 2.6 ± 1.3) ကိုကုထုံးပြီးနောက်မပြောင်းလဲခဲ့သညျ။ 13.7 ± 5.3: နာလန်ထူပြီးပြည့်စုံခဲ့သည့်အခါ, ထိုဟော်မုန်း၏သွေးရည်ကြည်တန်ဖိုးများကိုသိသိသာသာသိသိသာသာလျော့နည်းသွားကြောင်းငါ-LH အဆင့်ဆင့်၏ချွင်းချက် (B-LH အတူတိုးလာ vs 22.6 IU သည် / L ကို± 5.4, P<0.001; ငါ -LH: 5.2 ± 1.7 vs 2.6 IU သည် / L ကို± 5.4, P<0.001; B / I-LH: ၃.၇ ± ၄.၁ vs 11.8, 7.8 ± P<0.001) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်လူနာများအားတုံ့ပြန်ဖြေကြားရာတွင်ပုံစံတမျိုးကိုတွေ့ရသော်လည်း ပို၍ နိမ့်သော်လည်းသိသိသာသာရှိသည် (B-LH: 14.8 ± 6.9) vs 17.2 IU သည် / L ကို± 7.0, P<0.05; ငါ -LH: 5.4 ± 2.2 vs 4.0 IU သည် / L ကို± 1.7, P<0.05; B / I-LH: ၃.၇ ± ၄.၁ vs 5.8, 4.2 ± P
ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှု ED ၏အမျိုးမျိုးသော etiological အကြောင်းတရားများနှင့် / သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောခွန်အားမရှိခြင်းကုထုံးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမဦးဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေတုံ့ပြန်များတွင်ဟော်မုန်းတန်ဖိုးများမီနှင့်အပြီးကုသသည့် etiological အမျိုးအစားများ၏အခြေခံပေါ်မှာခှဲဝေခဲ့ကြသည်။ မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအဆိုပါ etiology ၏, ကုထုံး (စားပွဲတင် 1, ကော်လံ 0) ပျက်ကွက်သောလူနာ B / I-LH အချိုးမ increment ပြသခဲ့သည်။ လုံးဝ (စားပွဲတင် 1, ကော်လံ2+) ပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့သူလူနာတစ်ဦးချင်းစီ etiological အုပ်စု B က / I-LH တန်ဖိုးသိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်ပုံစံတူညီလူနာအတွက် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အဘို့အသရုပ်ပြခဲ့သည်။7
ဒုတိယဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာမှာတွေ့ရတဲ့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကွဲပြားခြားနားသောကုထုံးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ (Prostaglands လုပ်လိုက်တာ, E: ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သုံးကုထုံးလူမျိုးကွဲသို့အမျိုးမျိုးသောခွန်အားမရှိခြင်းကုသမှုပိုင်းခွဲ1, yohimbine) နှင့်စက်မှု (လေဟာနယ်ကိရိယာ penile prostheses, သွေးကြောခွဲစိတ်) ကုထုံး (ပုံ 2) ။ စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းနှင့် LH ၏ခ / ငါအချိုးဟော်မုန်းတန်ဖိုးများ၏ပုံမှန်ယင်းကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းဆန္ဒပြ, သာအပြည့်အဝသုံးဦးစလုံးကုထုံးလူမျိုးကွဲအတွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သူလူနာနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်သူအချို့အတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်အတွက်တိုး၏စာရင်းအင်းအရေးပါမှု ခွန်အားမရှိခြင်းကုထုံးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထို့ကွောငျ့အပြန်လည်စတင် se နှုန်းသည်အောင်မြင်သောကုထုံး၏ရှေးဦးစွာ မှစ.3လအတွင်း, LH biopotency restores ။ ဆနျ့ကငျြဘ, မြဲ ED နှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်နိမ့် B-LH ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့သင်ျခြိုလူနာ LH ၏ခ / ငါအချိုးသိသိသာသာကျန်းမာလူတို့အားရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူလျှော့ချကြောင်းပြသပါ။ ငါတို့သည်လည်း etiological သို့မဟုတ်လက်ခဏာကုထုံးနှစ်မျိုးလုံးနှင့်အတူရရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ပြန်လည်စတင်ပေါ်မှာဤ endocrine ပုံစံများ၏ပြောင်းပြန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
လုံလောက်သောလွှဲခွင်နှင့်ကြိမ်နှုန်း၏ GnRH ပဲမျိုးစုံဟာ gonadotrophs အားဖြင့် LH ၏ပုံမှန်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ပုံမှန် B / I-LH အချိုးအစားနှင့်အတူ LH ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဝေဖန်ဆုံးအဖွတျဖြစ်ကြသည်။26,27 တကယ်တော့, LH bioassay endogenous GnRH Secret ၏အထိခိုက်မခံတဲ့ parameters တွေကိုအဖြစ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ immunoassayble LH က RIA ဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်ဘယ်သူကိုအတွက် 23-25 y ကအသက် 50 သင်ျခြိုယောက်ျားအပေါ်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများတိုးချဲ့ပါပြီ။17 ပစ္စုပ္ပန်စီးရီး nonorganic, သွေးကြောများနှင့်အာရုံကြောလူနာပါဝင်သည်စဉ်အရေးကြီးတာကအဲဒီအစောပိုင်းစီးရီး, သက်သက်သာ psychogenic သင်ျခြိုလူနာပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်အစောပိုင်းလူနာတွေတစ်ခုသာအနိမ့်သွေးရည်ကြည် Testosterone နဲ့ခွန်အားမရှိခြင်းနဲ့ဆက်စပ်သွေးရည်ကြည် LH တစ်ဦးအနိမ့် bioactivity ဖေါ်ပြခြင်းအခြေခံမှာကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ psychogenic ခွန်အားမရှိခြင်းဟာ hypothalamic GnRH သွေးခုန်နှုန်းမီးစက်ကိုရည်မှတ်နေတဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ Gonadotropic ဟော်မုန်းထုတ်လွှမျိုးဆက်ပွားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ neuroendocrine ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှထင်နေသည်။28
ကျနော်တို့ LH ၏ဇီဝ hypoactivity နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်မဟုတ်ကြောင်းဤနေရာတွင်ပြသခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ ED အောင်မြင်စွာကုသတင်သည့်, (ရလဒ်အဖြစ်, testosterone ဟော်မုန်းပုံမှန်ဆီသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနှင့်,) LH bioactivity ပုံမှန်ဆီသို့တိုးမြှင့်ပြီးနောက်3လအတွင်း, ကုသပုံကို။7 ကုထုံးပျက်ကွက်မပြောင်းလဲဟော်မုန်းပုံစံအရွက်နေချိန်မှာတစိတ်တပိုင်းကုထုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုအောက်ပိုင်းအတိုင်းအတာအထိဟော်မုန်းပုံစံပြုပြင်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ရေရှည်တည်တံ့ခွန်အားမရှိခြင်းနဲ့ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု (ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းတည်တံ့ဖြစ်ပါသည်) အလှည့်အတွက်လျှော့ bioactivity နှင့်အတူ LH မော်လီကျူး secrete ဖို့ pituitary ဖြစ်ပေါ်စေသည်ရာ, ထို GnRH သွေးခုန်နှုန်းမီးစက်တစ်ခု hypothalamic နှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော hypothesize လိမ့်မည်။ ဤသည် erectile ပျက်ကွက်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် endogenous opiates ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအားဖြင့်အကြံပြုသည်7,17,29,30 အဆိုပါ hypothalamic GnRH ၏သွေးခုန်နှုန်းမီးစက်အဖြစ် LH အဆင့်ဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်သရုပ်ပြခဲ့ကြပြီတ္ထုများ။31,32 တကယ်တော့ဒါဟာ nonorganic ခွန်အားမရှိခြင်းပုံမှန်လွှဲခွင်ထက်နိမ့်များ၏ pulsatile GnRH လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။17 နိမ့်တဲ့ B-LH အဆင့်ဆင့်အမှန်ပင်လျော့နည်းသွား testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကတည်းက17,33,34 နှင့် testosterone ဟော်မုန်း, သိသိသာသာခ / I-LH အချိုးကိုတိုးမြှင့်နိုင်35 ED မှာတွေ့ရတဲ့အနိမ့်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်7 အလှည့်တစ်ဦးမှန်ကန်သော GnRH ဥတု၏အနှောင့်အယှက်များကိုချဲ့ထွင်လိမ့်မည်။ သွေးရည်ကြည် Testosterone နဲ့ B-LH အဆင့်ဆင့်အကြားနီးကပ်စွာ Parallel ဟာလျော့နည်းသွား LH bioactivity, သီးသန့်, အဓိကအားပျက်ကွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များမှာတွေ့ရှိ testicular အန်ဒရိုဂျင် Secret ၏တားစီးတာဝန်ရှိသည်လျှင်မဟုတျကွောငျး။ နိဂုံးမှဦးဆောင်7
ပညာရေးအားဖြင့်အစပျိုးအဆိုပါဆိုးစက်ဝိုင်းရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ် ပုံ3(က)။ ဒါကတစ်ဦးသပ္ပါယ်ယန္တရားကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဟာ hypothalamic-pituitary ဝင်ရိုး၏ activation မှတဆင့်သူ့ဟာသူ feeds နှင့်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရှိသည်ဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနိမ့်အဆင့်ကိုရန်ဟော်မုန်းမျိုးဆက်ပွားဝင်ရိုး reset လုပ်တယ်။ အဆိုပါဆိုးစက်ဝိုင်းမသက်ဆိုင်သည့် nonhormonal ကုသမှု (များ၏နည်းလမ်း၏, နှောင့်အယှက် (နှင့် LH-testosterone ဟော်မုန်းဝင်ရိုးပွနျလညျထူထောငျ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြင့်နေသည်ပုံ 3B) ။ ဒါဟာ LH bioactivity တစ်အလားတူချို့ယွင်းအမျိုးသမီးများနှင့်ညီမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်တည်ရှိခြင်းရှိမရှိကြည့်ဖို့ယခုအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အရှုံးအနိမ့်ခ / ငါ LH အချိုးအစားအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းသရုပ်ပြပွီ, ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပြန်လည်စတင်ဒီ endocrine ပုံစံ restore လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု hypothalamic-pituitary ဝင်ရိုး၏ activation တစ်လျှောက်လုံးကိုယ်နှိုက်ကအစာကျွေးနိုင်ကြောင်းအကြံပြု, လာမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးနှင့်အတူတူပင် endocrine ဝင်ရိုး၏ Re-activation အဘို့ပြင်ဆင်ကြရသည်။
စာရေးဆရာများသည်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည့်စာမူကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက် Dr. Massimino D'Armiento နှင့် Susanna Dolci အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သူမ၏အတွင်းရေးမှူးအလုပ်အတွက် Paola Minelli နှင့် Dr. Rosaria Caruso တို့အားကျွန်ုပ်တို့၏အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤစာတမ်းကိုအီတလီတက္ကသိုလ် ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနထောက်ပံ့မှုများမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
1 ။ သင်ျခြိုအပေါ် NIH သဘောတူညီချက်ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Panel ကို။ ဂျေအေအမ်အေ 1993; 270: 83-90 ။
2 Feldman HA et al. သင်ျခြိုနှင့်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ J ကို Urol 1994; 151: 54-61 ။ MEDLINE
3 Krane RJ, စတိန်းငါ Sanz က de Tejada ဗြဲ သင်ျခြို။ နယူး Engl J ကို Med 1989; 321: 1648-1659 ။ MEDLINE
4 Utiger RD ။ ခွန်အားမရှိခြင်းများအတွက်တစ်ဦးကဆေးလုံး။ အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ နယူး Engl J ကို Med 1998; 338: 1458-1459 ။ MEDLINE
5 Govier FE, Dale လူယာ R ကို, Kramer-Levien ဃ အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းဆုံးဖြတ်ပေးနိုင် အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် endocrine စိစစ်။ J ကို Urol 1996; 156: 405-408 ။ MEDLINE
6 Johnson က AR, Jarow JP ။ လိုအပ်သောသင်ျခြိုယောက်ျား၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် endocrine စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သနည်း J ကို Urol 1992; 147: 1542-1543 ။ MEDLINE
7 Jannini EA ၏ et al. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအတွက်နောက်ပြန်လှည်လျှော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ int J ကို Androl 1999; 22: 385-392 ။ ဆောင်းပါး MEDLINE
8 Dufau ML, Beitins IZ, မက်က်အာ JW, Catt KJ ။ ပုံမှန်ဘာသာရပ်များအတွက် bioactive နှင့် immunoreactive သွေးရည်ကြည် LH အဆင့်ဆင့်အပေါ်သို့ဟော်မုန်း-releasing ဟော်မုန်း (LHRH) luteinizing ၏ဆိုးကျိုးများ။ ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1976; 43: 658-667 ။ MEDLINE
9 ငွေရတတ်သောသူ BH, Rosenfield RL, Moll GW, Lucky AW ။ ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအထီးအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဟော်မုန်း pituitary သိုက် luteinizing Bioactive ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1982; 1: 140-146 ။
10 Nagamani N ကို, Osuampke ကို C, Kelver ME ။ အဆိုပါသားဥအိမ်၏ hyperthecosis နှင့်အတူအမျိုးသမီးဟော်မုန်းပမာဏနှင့်ဇီဝ / Immuno အချိုး luteinizing တိုးလာ bioactive: hyperinsulinemia ၏ဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 1685-1689 ။ MEDLINE
11 Katt KJ, Dufau ML ။ Gonadotropic hormones: biosynthesis, Secret, receptors နှင့်အရေးယူ။ ခုနှစ်တွင်: ယန်း SSC, Jaffe RB (eds) ။ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ Saunders Co. ,: Philadelphia တွင်, 1991, 105-155 ။
12 Fabbri ဟာသူတို့အဖွဲ့ရဲ့တစ်ဦးက et al. အထီးခွန်အားမရှိခြင်းအတွက်နဲ့အတူ Endorphins: စိတ်ရှည်ကုထုံးအတွက် erectile လှုပ်ရှားမှု naltrexone ဆွဘို့အသက်သေအထောက်အထား။ Psychoneuroendocrinology 1989; 14: 103-111 ။ MEDLINE
13 Heiman JR, Rowland DL ။ အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပုံစံများ: လိင်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်အလုပ်မဖြစ်ယောက်ျားအပေါ်ညွှန်ကြားချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Psychosom Res 1983; 27: 105-116 ။ MEDLINE
14 Korenman စင်ကာပူဒေါ်လာ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏နားလည်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1995; 80: 1985-1988 ။ MEDLINE
15 Dufau ML, Pock R ကို, Neubauer တစ်ဦးက, Catt KJ ။ စသည်တို့အတွက် လူ့သွေးရည်ကြည်အတွက် LH ၏ bioassay: ကြွက် Interstitial ဆဲလ် testosterone ဟော်မုန်း (RICT) assay ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1977; 42: 958-969 ။
16 Spratt: D et al. WF ။ Bio- နှင့် gonadotropin-releasing ဟော်မုန်း (GnRH) ၏အနိမ့်ဆေးများမှ immunoreactive luteinizing ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု: GnRH-လစ်လပ်အမျိုးသားများတွင်ထိုး-တုံ့ပြန်မှု curves ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1986; 63: 143-150 ။ MEDLINE
17 Fabbri ဟာသူတို့အဖွဲ့ရဲ့တစ်ဦးက et al. nonorganic အထီးခွန်အားမရှိခြင်းအတွက်အနိမ့် bioactive luteinizing ဟော်မုန်း: ပြောင်းလဲ gonadotropin-releasing ဟော်မုန်းနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှကြားဆက်ဆံရေး။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1988; 67: 867-875 ။ MEDLINE
18 Linet Oi, Ogrinc အပြည်ပြည်သွား။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် intracavernosal alprostadil ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု။ နယူး Engl J ကို Med 1996; 334: 873-877 ။ MEDLINE
19 Padma-နာသန် H ကို et al. စိုက်ထူများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Urethral စနစ် transurethral alprostadil နှင့်အတူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျား၏ (မူဆယ်) လေ့လာ Group မှကုသမှု။ နယူး Engl J ကို Med 1997; 336: 1-7 ။ MEDLINE
20 အမည်မသိ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Yohimbine ။ Med လက်တမူးယစ်ဆေး Ther 1994; 36: 115-116 ။
21 Kaplan HS ။ The New လိင်ကုထုံး။ Brunner / မာဇယ်လ်၏: နယူးယောက်, 1974 ။
22 Levine FJ, စတိန်းဗြဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သွေးကြောပြန်လည်ခွဲစိတ်။ int J ကိုသင်ျခြို Res 1990; 2: 59-78 ။
23 Glibert P ကို et al. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်သွေးပြန်ကြောခွဲစိတ်။ Urol Int 1992; 49: 40-47 ။ MEDLINE
24 Petrou SP, Barret DM ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် penile prostheses များအသုံးပြုမှု။ sem Urol 1990; 8: 138-152 ။
25 Meinhardt W က et al. erectile မမှန်များအတွက်အနုတ်လက္ခဏာဖိအား device ကို: အခါကျရှုံးသနည်း? J ကို Urol 1993; 149: 1285-1287 ။ MEDLINE
26 Segre GV, Brown ကမာခ်။ ဟော်မုန်းအတိုင်းအတာ။ ။ ခုနှစ်တွင်: ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ Williams ဟာဖတ်စာအုပ်, IX ထုတ်ဝေ။ Saunders Co. ,: Philadelphia တွင်, 1998, 43-54 ။
27 Veldhuis JD, ဂျွန်ဆင် ML, Dufau ML ။ လူကို endogenous နှင့်အနိမ့်ထိုး exogenous gonadotropin-releasing ဟော်မုန်းပဲမျိုးစုံတုံ့ပြန် bioactive luteinizing ဟော်မုန်း၏ဦးစားပေးဖြန့်ချိ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1987; 64: 1275-1282 ။ MEDLINE
28 Sherwood N. peptides ၏ GnRH မိသားစု။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 1987; 10: 129-132 ။
29 စတိန်းဂျေအေ။ Erectile function ကိုနှင့် naltrexone ။ အမ်း International Med 1986; 105: 799 ။ MEDLINE
30 Brannemann W က et al. အဆိုပါ opiate ရန်naltrexone¾aကို double-မျက်စိကန်းသောလေ့လာမှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် idiopathic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆက်ဆံမှု။ J ကို Androl 1993; 14: 407-410 ။ MEDLINE
31 Veldhuis JD, Rogol အေဒီ, Samojlik အီး, Ertel နယူးဟမ်းရှား။ လူဟော်မုန်း Secret luteinizing ၏ pulsatile ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစရိုဂျင်၏အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်လုပ်ရပ်များ၏စကားရပ်ထဲမှာ endogenous opiates ၏အခန်းက္ပ။ J ကို Clin Invest 1984; 74: 47-55 ။ MEDLINE
32 Lightman SL et al. ကွဲပြားခြားနားသော pathophysiological ပြည်နယ်များအတွင်းရှိဟော်မုန်း luteinizing ၏ opioid ထိန်းချုပ်မှုမွဲ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1981; 52: 1260-1263 ။ MEDLINE
33 Plourde PV, Dufau ML, Plourde N ကို, Santen RJ ။ တစ်ဦး pituitary ကြောကျခဲနှငျ့ယောကျြားအတွက်ဟော်မုန်း luteinizing ၏ immunological အချိုးနိမ့်ဇီဝနဲ့ဆက်စပ်ခွန်အားမရှိခြင်း။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1985; 60: 797-802 ။ MEDLINE
34 ဖြစ်တဲ့ Warner BA, Dufau ML, Santen RJ ။ ယောက်ျားအတွက် pituitary-testicular ဝင်ရိုးအပေါ်အိုမင်းမှုနဲ့ရောဂါဆိုးကျိုးများ: ဟော်မုန်း luteinizing အတွက်အရည်အသွေးအဖြစ်အရေအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab 1985; 60: 263-268 ။ MEDLINE
35 Carani ကို C et al. testosterone ဟော်မုန်း undecanoate နဲ့ကုသသင်ျခြိုယောက်ျားအတွက် luteinizing ဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့၏ immunoreactivity အချိုးဖို့ bioactivity အတွက်အပြောင်းအလဲများ။ Acta Endocrinol 1989; 120: 284-288 ။ MEDLINE
ပုံ 1 immunoreactive LH (က) ၏သွေးရည်ကြည်တန်ဖိုးများ; bioactive LH (ခ) အဆင့်ဆင့်; 83 သင်ျခြိုလူနာနှင့်ဇီဝ / immuno-LH အချိုး (B / I-LH, C ကို) ။ တန်ဖိုးများကို 30 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု vs sd ±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ပုံ2သတ်မှတ်ထားသောကုထုံးအစမှ (၃) လကြာပြီးနောက် (post မတိုင်မီ) နှင့် (post) ပြီးနောက် (၃) လအကြာဇီ ၀ / immuno LH အချိုး (B / I LH) ပါဝင်မှုကိုအားနည်းသောအမျိုးသား ၈၃ ဦး တွင်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ လူနာများကိုရလဒ်အရအမျိုးအစားခွဲခြားသည် - တစ်လလျှင်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုမှုရှစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်မကအောင်မြင်မှုရှိလျှင် 'အပြည့်အဝတုံ့ပြန်သူများ'၊ တစ်လလျှင်အနည်းဆုံးအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခု (၁+) ရှိခဲ့လျှင် 'တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတုံ့ပြန်သူများ'၊ နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါက 'ဖြေသူမဟုတ်သူများ' (83) ။ လူနာရှစ် ဦး မှာ etiological အကြောင်းတရားများရှိသည်ကြောင့် etiological အုပ်စုများ၏စုစုပေါင်းတက် add ပါဘူး။ ကန ဦး ရောဂါရှာဖွေရေးကိုလည်းညွှန်ပြနေကြသည်။ Prostaglandin E3 ကို intracavernosal ဆေးထိုးဖြင့် ၁၀-၂၀ µ ဂရမ်ဖြင့်ထိုးပေးသည်18 သို့မဟုတ် transurethral အားဖြင့် 500 μgတစ်ထိုးမှာ, အုပ်ချုပ်ရေး;19 yohimbine Hydrochloride တနေ့သုံးကြိမ် MG 5.4 တစ်ထိုးမှာ, နှုတ်ပေးထားခဲ့သည်။20 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး HS Kaplan ၏စံကုထုံး protocol များကို အသုံးပြု. လျှောက်ထားခဲ့သည် (ကအချိန်ကန့်သတ် format ကိုနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ခုတာဝန်ကျတဲ့နေရာ, ခေါ်ဆောင်သွားလေ့ကျင့်ခန်းအိမ်မှာထွက်သယ်ဆောင်နှင့်နောက်ဆက်တွဲကုထုံးအစည်းအဝေးများမှာဆှေးနှေးခံရဖို့ဘွဲ့ရ) ။21 သွေးကြောခွဲစိတ်သွေးလွှတ်ကြောပြန်လည်ခွဲစိတ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပါဝင်သည်22 သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောမထိန်းနိုင်အဖြစ်ဖော်ထုတ်သွေးပြန်ကြောများ၏ရွေးချယ်သွေးပြန်ကြော Ligation (SVL) အဖြစ်သွေးပြန်ကြောခွဲစိတ်။23 ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ penile prostheses ငွေ Self-ပါရှိသော prostheses ခဲ့ကြသည်။24 နောက်ဆုံးအနေနဲ့စီးပွားဖြစ်လေဟာနယ်ကျပ် devices တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။25 * P <0.05; ** P <0.001 ။
ပုံ3erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (က) ကာလအတွင်းအနိမ့် LH biopotency ၏ Physiopathology; နှင့် hypothalamus-pituitary-testis ဝင်ရိုး (ခ) ၏ activation တစ်လျှောက်လုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပုံမှန် autofeeding ။ မဆိုအကြောင်းမရှိ၏ခွန်အားမရှိခြင်းများအတွက်လိင်ကိစ္စလှုပ်ရှားမှု၏တွေးဆစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရေးနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့မှန်ကန်သော GnRH ဥတုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဒီအလှည့်၌, hypothalamus-pituitary ဆက်သွယ်ရေး၏အပြောင်းအလဲတချို့အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို၏ချွတ်ယွင်းများကိုချဲ့ထွင်လိမ့်မည်။